HESHIIS DHAN: Real Madrid Oo Heshiis La Gaadhay Xiddigii Ay Muddada Raadinaysay Ee Kylian Mbappe - GOOL24.NET
HESHIIS DHAN: Real Madrid Oo Heshiis La Gaadhay Xiddigii Ay Muddada Raadinaysay Ee Kylian Mbappe
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ugu dambayn gacanta ku dhigtay xiddiga reer France ee Kylian Mbappe, saacado kooban ka hor waqtiga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda ee bisha January.
Real Madrid ayaa muddo dheer raadinaysay Kylian Mbappe oo xagaagii ay PSG ugu diiday inay kaga iibiso 200 milyan oo Euro, hase yeeshee Los Blancos ayaa maanta oo Isniin ah waxay heshiis shaqsi ah la gashay 23 jirkan oo si bilaash ah ugu soo wareegi doona bisha June ee soo socota, iyadoo uu si xor ah uga iman doona Paris Saint-Germain.
Heshiiska Kylian Mbappe iyo Real Madrid ayaa lagu dhawaaqi doonaa marka ay labada kooxood ku kala baxaan kulamadooda wareegga 16ka Champions League ee ay isku dhaceen, waxaanay lugta hore ku kulmi doonaan magaalada Paris badhtamaha bishan aynu ku jirto, ka hor inta aanay lugta labaad isku ballansan Santiago Bernabeu horraanta bisha dambe ee March.
Wargeyska BILD ee kasoo baxa waddanka Jarmalka ayaa maanta boggiisa hore ku daabacay heshiiska Real Madrid iyo Kylian Mbappe oo dhigaya in laacibkani uu sannadkii mushahar u qaato 50 milyan oo Euro oo ay cashuurtu la socoto, taas oo ka dhigan inuu aad uga mushahar badnaanayo intii uu ka qaadan jiray PSG.
Marka cashuurta laga jaro, waxa uu mushaharka xaasilka ah ee Mbappe uu noqon doonaa 38 milyan oo Euro, waxaana uu soo gaadhi doonaa Madrid marka uu dhamaado xilliciyaareedkan socda gaar ahaanbisha June.
PSG ayaa luminaysa xiddigeeda ugu qaalisan oo si bilaash ah kaga tegi doona iyagoon hal Euro ka helin waxaanay arrintani imanaysaa iyagoo bilo kooban ka hor iska diiday 200 milyan oo Euro oo ay Real Madrid u bandhigtay si ay laacibkan ugala wareegto.